Fil d'actualités du 23/05/2019
23/05/2019 - 09:30 : ANKAZOMANGA: Tapaka tanteraka ny lalana manomboka eo amin'ny Pave Ankazomanga hatreny amin'ny "Rond point boulevard" noho ny fanamboarana.
23/05/2019 - 09:00 : MAHAJANGA: Mandeha ny fanentanana samihafa ataon'ny Prefe miantso ny olona hanotrona an'i Andry Rajoelina izay ho avy Mahajanga anio.
23/05/2019 - 08:30 : SONIERANA: Mitohy ny fahatapahan'ny làlana manomboka eo amin'ny "Rond point Descours" ka hatreo amin'ny "Rond point Gastro Pizza" noho ny fanamboaran-dàlana.
23/05/2019 - 07:45 : LOZA MAHATSIRAVINA: Olona iray maty tsy tra-drano noho ny lozam-pifamoivoizana amin'izao ora izao eny amin'ny By Pass, miala kely ny Espace Yandy raha mizotra mianavaratra.
22/05/2019 - 13:35 : ANDRY RAJOELINA: Taorian'i Maroantsetra, dia migadona any Antalaha amin'izao fotoana izao i Andry Rajoelina. Ora-mikija any an-toerana.
22/05/2019 - 12:30 : FIAINAM-PIRENENA: Tsy tokony miandry fitoriana ny HCC eo anatrehan'ny fihetsiky ny Filoha manao fampielezan-kevitra ankolaka, fa tonga dia mandray andraikitra manao "constat", hoy i Toavina Ralambomahay.
Archive du 20180405
Rajaonarimampianina Vita tanteraka ny aminy…
Tsy takona hafenina intsony, fa ambany dia ambany ny taham-pankafizan’ny vahoaka ny filoha ankehitriny Hery Rajaonarimampianina.
Horonan-tsary manala baraka sy resaka Bianco Hamaly bontana ny depiote HVM
Mitohy ny gidragidra eo amin’ny depiote mpanohana ny fitondrana nampandany ilay lalàna mifehy ny fifidianana ankilany, ary ireo nanohitra izany andaniny.
Mpanao politika tsy ho tafaverina amin’ny fitondrana Mihazakazaka mangoron-karena sisa
Miasa mafy ny ekipan’ny filoha ankehitriny amin’ny fitadiavana ny hevitra sy lalana ambanin’ny tany hifikirana amin’ny fahefana miaraka amin-dRajaonarimampianina. Tena mitolona mba hamotsy ny efa mainty mihitsy.
Depiote Malagasy Malaza amin’ny fivarotan-tena
Mivaro-tena no kisary an-tsaina hitan’ny rehetra raha mijery ny rivotra sy ny tontolo iainan’ireo depiote eny Tsimbazaza tao anatin’izay fivoriana in-3 miantoana tao anatin’ny 1 volana latsaka kely izay.
Fifidianana 2018 Zarina kitoatoa ny Malagasy
Zarina kitoatoa indray, tahaka izay nitranga tamin’ny fandaniana ny lalàmpanorenan’ny repoblika faha-4 ny Malagasy, raha ny zava-misy niseho niharihary teo anivon’ireo andrim-panjakana maro teto amin’ny firenena tato ho ato.
Potika ny toekarena sy ny toetsaina Ady mafy ny an’ny mpitondra manaraka eo
Efatra taona nampietry ny firenena ny fanjakana HVM tarihin-dRajaonarimampianina amin’izao fotoana. Niha nitotongana sy nijotso hatrany ny toekarem-pirenena, simba tanteraka ny fomba fisainan’ny Malagasy.
Antenimieram-pirenena Raikitra indray ny fivoriana tsy ara-potoana faha-4
Araka ny fanapahan-kevitra noraisin’ny filankevitry ny governemanta avy amin’ny tolo-kevitra naroson’ny praiminisitra Mahafaly Olivier omaly marainan’ny alarobia 4 martsa 2018 dia antsoina hiatrika fivoriana tsy ara-potoana andiany faha-4
Zaza mpangataka eto an-drenivohitra Mahazo 2.000 Ar isan’andro
Zaza tsy ampy taona ny ankamaroan’ireo mangataka eto an-drenivohitra amin’izao.
Raharaha METM Mihemotra amin’ny 7 mey ny fitsarana
Taorian’ny savorovoro niseho teo anivon’ny fiangonana METM foibe sy ny METM Zoara famonjena tetsy Antohomadinika ny 12 martsa teo izay nitarika ny fanakatonan’ny fitondram-panjakana ity vondrom-pivavahana Misiona evanjelikan’ny teratany eto Madagasikara ity dia niakatra fampanoavana tetsy amin’ny lapan’ny fitsarana Anosy ny talata teo ny raharaha.
Pachamama rugby Mpikambana 7 nitsidika an’i Madagasikara 10 andro
Nitsidika teto Madagasikara nandritra ny 10 andro ireo 7 mirahalahy mpilalao tranainy tao amin’ny ekipam-pirenena frantsay eo amin’ny taranja rugby à XV sady mpikambana ao amin’ny Pachamama rugby mpiara-miasa amin’ny Rcts na Rugby Clus Tanoan’i Soavimasoandro eny Imamba izay misy ny « centre » fitaizana sy fanabeazana ankizy natsangan’izy ireo.
Trophée Barthes U-20 édition 2018 Namibie sy Tonizia no nahery
Tontosa avokoa ny fifaninanana Rugby XV Trophée Barthès 2018 ho an’ny Groupe Nord nisy an’i Tunisie, Sénégal, Côte d’Ivoire ary Maroc sy ny Groupe Sud nahitana an’i Namibie, Madagascar, Kenya ary Zimbabwé.
Tsy mbola naheno ny angano momba ny Vorombola sy ny Voahangy rarak’Ikotofetsy sy Imahaka ary ve izao fitondrana izao no dia mbola sahy milalao afo ihany ?
DEPIOTE TODY ARNAUD
Voaporofo fa nisy fizarana vola sy kolikoly tamin’ny fandaniana ny lalàm-pifidianana teny amin’ny antenimieram-pirenena, hoy ny depioten’i Soanierana Ivongo Tody Arnaud.